Izindaba - Ungahamba ngemoto yamaShayina? Izinkulungwane zama-Aussies zithi yebo
Ungahamba ngemoto yamaShayina? Izinkulungwane zama-Aussies zithi yebo
Imikhiqizo yamaShayina yezimoto isiqala ukwakha isigaxa esikhulu sezimoto zase-Australia. Ngabe imakethe izosinda yini ebudlelwaneni obuwohloka ngokushesha bamazwe?
IZIMOTO EZILINDELE UKUTHENGELWA KWIMakethe EMHLABENI EJIANGSU, ECHINA (IMAGE: TOP PHOTO / SIPA USA)
I-Australia ibambene ngezihluthu neChina. Kepha akekho owatshela abathengi bezimoto base-Australia abagxilisa ukungeniswa kwamaShayina ngenani elingakaze libonwe.
Le nto ikhombisa ukuthi budlondlobele kangakanani ubudlelwano bezomnotho baseChina ne-Australia, nokuthi kuzoba nzima kangakanani ngakolunye uhlangothi ukuzikhulula ngokuphelele, yize nobudlelwano bezepolitiki buya ngokuqina.
I-China ithuthukise ngokushesha umkhakha wezimoto, ngokulandela ezinyathelweni zomakhelwane bayo abasempumalanga ye-Asia iJapan neKorea. Izwe likhaya lamamaki amaningi, amaningi awo abonakala ephumelela kakhulu e-Australia.
Njengoba igrafu elandelayo ikhombisa, ukuthengiswa kwezimoto zaseChina kukhuphuke ngama-40% kulo nyaka, kanti ukuthengiswa kwezimoto zaseGerman kwehle ngama-30%.
Okwamanje, inani eliphelele lezimoto ezithengisiwe lilingene. Ukungeniswa kwezimoto zamaShayina eziya e-Australia kungaphansi nje kuka-16,000 - ngaphansi kuka-10% wevolumu yokuthengisa yaseJapan (188,000) nekota eningi njengeKorea (77,000).
Kepha imakethe yezimoto zasekhaya yaseChina yiyona enkulu kunazo zonke emhlabeni - izimoto eziyizigidi ezingama-21 zathengiswa ngonyaka odlule. Njengoba ukufunwa kwasekhaya kulelo zwe kucwila ngesikhathi se-coronavirus, lindela okuningi ukuthi kuvuze emakethe yomhlaba.
Ngokombono womthengi, ukuheha kwemoto yamaShayina kubonakala ngokusobala. Uxosha inkatho ngemali eningi esele esisele ephaketheni lakho.
Ungathenga iFord Ranger ngo- $ 44,740… noma iGreat Wall Steed ngo- $ 24,990.
Ungathenga i-spec ephezulu yeMazda CX-3 ngo- $ 40,000… noma i-spec ephezulu ye-MG ZS ngo- $ 25,500.
UMG wake waba yiMorris Garages, ezinze e-Oxfordshire, kepha manje seyiphethwe yiSAIC Motor Corporation Limited, okuyinkampani ezinze eShanghai ephethwe umbuso waseChina. Ngemuva kokungaphumeleli ekuqaleni kokuthekelisa okuthekelisa ngohlobo lweChery neGreat Wall, iChina ibambe imikhiqizo embalwa yakwamanye amazwe ukusiza ukuvula indlela yokuthunyelwa kwayo kwamanye amazwe.
Imboni yezimoto yaseChina ivulekele usizo lwangaphandle iminyaka eminingi. Ngonyaka ka-1984, ngaphansi kwethonya lomholi uDeng Xiaoping, iChina yemukela iVolkswagen kuleli.
AbakwaVW basungule ibhizinisi elihlanganyelwe eShanghai futhi abakabheki emuva. Kungumkhiqizo odayiswa kakhulu ezweni elinamasheya angaphezu kokuphindwe kabili emakethe yeHonda esendaweni yesibili.
Ukutshalwa kwezimali kwamanye amazwe nokwazi kusho ukuthi imboni yezimoto yaseChina isheshe yaxhuma phambili. I-China yayinezimoto eziyisishiyagalombili kubantu abayi-1000 ngo-2003. Manje inezingu-188. (I-Australia inezingu-730, iHong Kong inama-92.)
I-China isebenzisa impahla yezangaphandle ebuye kuze kube namuhla. Kanye neMG, iphethe enye imakethe yaseBrithani eyake yaduma, i-LDV. Uma uzithola ungemuva kwe-LDV kumgwaqo kulezi zinsuku ungaqiniseka ukuthi yenziwa eChina futhi iphethwe amaShayina ngokuphelele.
IVolvo ingeyaseChina futhi, eyenziwe ngabakwa-Hangzhou bezimoto ezisebenza ngezimoto iGeely. UGeely wenza amanye amaVolvos eChina. Thenga imoto kanokusho yase-Europe futhi kunethuba lokuthi yenziwe eChina - yize iVolvo Australia ingakwenzi kube lula ukuthola kahle ukuthi zenziwa kuphi izimoto zayo. UTesla ubuye wavula imboni eChina.
Ukwenza izimoto e-Asia akuyona neze into entsha embonini yezimoto zomhlaba. Umthombo wesibili wezimoto omkhulu e-Australia yiThailand, yize iThailand ingenawo umkhiqizo owaziwayo. Ngakho-ke singalindela ukugeleza okukhulu kwezimoto zaseChina eziya e-Australia, okungenani inqobo nje uma ubudlelwano bezomnotho bungahlukaniswa yizombusazwe.
Ukwehla okuphawulekayo ebudlelwaneni phakathi kwe-Australia neChina kuza phezu kwezepolitiki kokuthekelisa okuningana okuthunyelwa ngaphandle kwase-Australia. Ukuthunyelwa kwenkomo, ibhali newayini konke kube nempikiswano. Imfundo nayo.
UMengameli waseChina uXi Jinping kubukeka sengathi uthathe incwadi encwadini kaMongameli waseMelika uDonald Trump futhi uphikisana nabalingani bezohwebo, ikhefu elikhulu ngomkhuba waseChina. Kepha iChina akuyona iMelika. Izwe elingeniso eliphakathi nendawo elinokuncika kokuthekelisa kwamanye amazwe ukuze likhule. (IMelika, okwamanje, inenani eliphansi kakhulu lokuhweba kuya ku-GDP kunoma yiliphi izwe.)
Yingakho ukuthunyelwa kwezimoto zamaShayina kuthakazelisa kangaka. Umlando wemboni yezimoto zaseChina ungumfanekiso wokuncika kwayo emhlabeni wonke ngenqubekela phambili yayo. I-China ngokungangabazeki igcwalise imakethe yayo yasekhaya; amadolobha ayo aminyene kakhulu futhi imigwaqo yawo ayivaleki.
Okwamanje, iChina ithumela kuphela u-3% wemikhiqizo yayo yezimoto, kepha uma ifuna umnotho wayo uqhubeke nokukhula kuzodingeka ithumele amanye amazwe.
Imakethe yezimoto yaseChina enesizotha kodwa ekhula ngokushesha emele ingxenye enkulu yethuba elikhulu lokuthi iChina iqinise umnotho wayo.
Sidinga ukubona ukuthi asibona nje abathathi bezimoto zaseChina ezishibhile. Sibalulekile ekuthuthukisweni komnotho waseChina - futhi ukuthuthukiswa komnotho kungumthombo wokusemthethweni kuhulumeni waseChina.
Emdlalweni omkhulu wezepolitiki kungenzeka sibe bancane - kepha asishiywanga amandla phezu kweChina.